Carruurtaada Sida Wax Loo Baro | Reer Farxad Leh
KU AKHRI Abui Acholi Afrikaans Ahanta Ajië Akha Albanian Altai Alur American Sign Language Amharic Angolan Sign Language Arabic Arabic (Morocco) Arabic (Tunisia) Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Assamese Ateso Aukan Australian Sign Language Awajun Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Balinese Bambara Baoule Bariba Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Bassa (Liberia) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Belize Kriol Bengali Biak Bicol Bislama Bissau Guinean Creole Bolivian Sign Language Bomu Boulou Brazilian Sign Language Bulgarian Bété Cakchiquel (Central) Cambodian Carib Catalan Cebuano Changana (Zimbabwe) Chavacano Chichewa Chilean Sign Language Chin (Hakha) Chin (Tiddim) Chin (Zotung) Chinese (Cantonese) Chinese (Traditional) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuabo Chuvash Cibemba Cinamwanga Cinyanja Colombian Sign Language Comorian (Ngazidja) Croatian Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Damara Dangme Danish Dayak Ngaju Digor Diola Douala Drehu Dusun Dutch Ecuadorian Sign Language Edo Efik Emberá (Catío) English Esan Estonian Ewe Faroese Fijian Filipino Sign Language Finnish Finnish Sign Language Fon Frafra French French Sign Language Ga Galician Garifuna Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Gitonga Gourmanchéma Greek Greenlandic Guadeloupean Creole Guarani Guarani (Bolivia) Guatemalan Sign Language Guerze Guianese Creole Gujarati Gun Guna Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Huastec (San Luis Potosi) Hungarian Hungarian Sign Language Hunsrik Iban Ibanag Ibinda Icelandic Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Jula Kabardin-Cherkess Kabiye Kabuverdianu Kabyle Kachin Kalanga (Zimbabwe) Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kekchi Khana Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinande Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisii Kongo Konkani (Roman) Korean Korean Sign Language Kpelle Krio Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kurdish Sorani Kwangali Kwanyama Kyangonde Lahu Lamba Laotian Latvian Lenje Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Low German Luganda Lugbara Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Macushi Madagascar Sign Language Madura Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Mam Mambwe-Lungu Mandjak Manipuri Mapudungun Marathi Martiniquan Creole Mauritian Creole Maya Mayo Mazahua Mazatec (Huautla) Mbukushu Mende Meru Mexican Sign Language Mingrelian Miskito Mixe Mixtec (Guerrero) Mixtec (Huajuapan) Mizo Mongolian Moore Motu Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Nambya Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nengone Nepali Nepali Sign Language New Zealand Sign Language Ngabere Ngangela Nhengatu Nias Niuean Norwegian Nsenga Nsenga (Mozambique) Nyaneka Nyungwe Nzema Odia Okpe Oromo Ossetian Otetela Otomi (Mezquital Valley) Panamanian Sign Language Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Pidgin (Cameroon) Polish Polish Sign Language Pomeranian Portuguese Portuguese (European) Portuguese Sign Language Pular Punjabi Punjabi (Shahmukhi) Páez Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quichua (Pastaza) Quichua (Santiago del Estero) Quichua (Tena) Rapa Nui Rarotongan Romanian Romany (Bulgaria) Romany (Eastern Slovakia) Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Northern Greece) Romany (Romania) Romany (Southern Greece) Rumanyo Runyankore Russian Russian Sign Language Rutoro Réunion Creole Samoan Sangir Sango Saramaccan Sarnami Sateré-Mawé Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Serer Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Seychelles Creole Shiinaha Mandarin (Fudud) Shona Shuar Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Solomon Islands Pidgin Soomaali Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Talian Tamil Tandroy Tankarana Tarahumara Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Ticuna Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Toraja Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Turkmen Turkmen (Cyrillic) Tuvaluan Tuvinian Twi Tzeltal Tzotzil Udmurt Uighur (Arabic) Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Venezuelan Sign Language Vezo Vietnamese Vietnamese Sign Language Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wichi Wolaita Wolof Xavante Xhosa Xârâcùù Yoruba Zambian Sign Language Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zimbabwe Sign Language Zulu
Carruurtaada Sida Wax Loo Baro
“Erayadan aan maanta kugu amrayo ha ku sii jireen qalbigaaga. Oo waa inaad carruurtaada aad u bartaa.”—Sharciga Kunoqoshadiisa 6:6, 7
Markuu Yehowah reerka abaabulay maammulka carruurta waalidka buu siiyay. (Kolosay 3:20) Waalid haddaad tahay masʼuuliyadda ku saaran waa tababbaridda carruurtaada siday u noqdaan dad weyn oo masʼuul ah oo Yehowahna jecel. (2 Timoteyos 1:5; 3:15) Weliba waa inaad ogaataa waxa ku jira qalbiga wiilkaaga ama gabadhaada. Masalkaagana aad buu muhim u yahay. Haddii ad ugu horreyn Yehowah Eraygiisa qalbigaaga hor gelisid carruurtaadana sida ugu fiican baad wax u bari kartaa.—Sabuurradii 40:8.
1 CARRUURTAADA U FUDUDEE INAY KULA HADLAAN
KITAABKA WUXUU BARAA: “Nin walba ha u dhaqsado maqlinta, oo ha u gaabiyo hadalka.” (Yacquub 1:19) Waxaad rabtaa inay carruurtaada dareemaan inay si xor ah kula hadli karaan. Haddaba dareensii inaad diyaar u tahay markay u baahan yihiin inay kula hadlaan. Nabadda dhawr siday waxay doonayaan kugu sheegaan. (Yacquub 3:18) Hadday u maleeyaan inaad naxariis darnaan doontid oona xukumi doontid waxaa laga yaaba inay is xirxiraan. Carruurtaada dulqaad u yeelo oo mar walba garansii inaad jeceshahay.—Matayos 3:17; 1 Korintos 8:1.
Markay carruurtaada u baahan yihiin inay kula hadlaan waqti sii
Xitaa dhib markay jirin carruurtaada mar walba la sheekeyso
2 ISKU DAY INAAD FAHAMTID WAXAY HADALKOODA ULA JEEDAAN
KITAABKA WUXUU BARAA: ‘Kii waxgarashada xajistaa wax wanaagsan buu heli doonaa.’ (Maahmaahyadii 19:8) Mararka qaarkood sidaad u garatid sida runta ah ay carruurtaada dareemayaan ha eegin waxay sheegaan keliya. “Kii xaajo ka jawaabaa isagoo aan maqlin, waa u nacasnimo iyo ceeb.” (Maahmaahyadii 18:13) Marmar dhallinyaradu wax aysan ka wadin bay iska sheegaan oo wax yar bay wax weyn ka dhigaan. Taas waa caadi. Haddaba ha ku degdegin cadhada.—Maahmaahyadii 19:11.
Wax walba ay carruurtaada sheegaanba goʼaanso inaadan hadalka ka dhex galayn oo adan ku xanaaqayn
Xusuuso markaad daʼdooda ahayd sidaad dareemi jirtay iyo waxa muhim ku ahaa
3 MIDNIMADIINNA MUUJIYA
KITAABKA WUXUU BARAA: “Wiilkaygiiyow, edbinta aabbahaa maqal, oo amarka hooyadaana ha ka tegin.” (Maahmaahyadii 1:8) Yehowah hooyo iyo aabbaba maammulka carruurta wuu siiyay. Carruurtaada waa inaad bartid inay ku ixtiraamaan oona ku dhegeystaan. (Efesos 6:1-3) Carruurtu way garan karaan markay si run ah waalidkood “isku maan” u ahayn. (1 Korintos 1:10) Markaad wax isku raacsanayn carruurtiinna ha tusinina waayo tani wax bay u dhimi kartaa ixtiraamka ay idiin qabaan.
Sidaad carruurtiinna u edbin doontaan ka wadahadla oo ku heshiiya
Tababbaridda carruurtiinna haddii adan isku raacsanayn isku day inaad fahamtid qofka kale
4 QORSHE SAMEYSO
KITAABKA WUXUU BARAA: “Ilmo u rabbee siduu ku socon lahaa.” (Maahmaahyadii 22:6) Iskama dhacayso inay carruurtaada si fiican wax u bartaan. Tababbar edbin ka tirsan tahay waa inaad u sii qorsheysid. (Sabuurradii 127:4; Maahmaahyadii 29:17) Edbin ciqaabid keliya ka ma koobnaa. Balse waxaa ka mid ah inaad ilmahaaga fahamsiisid sababaha ka dambeeya sharciyada ad u dhigtay. (Maahmaahyadii 28:7) Waa inaad weliba ilmahaaga bartid inay Erayga Yehowah jeclaadaan oona tacliimihiisa fahmaan. (Sabuurradii 1:2) Tani waxay ku caawin doontaa inay si cad u kala gartaan wanaagga iyo xumaanta.—Cibraaniyada 5:14.
Hubi inay carruurtaada Ilaahay u arkaan Mid run ah oo ay aammini karaan
Ku caawi inay arkaan oona iska ilaaliyaan dembiga nijaaseyn karo. Matalan khatarta laga helo Internetka iyo baraha bulshada. Bar siday iskaga ilaalin karaan kuwa doonayo inay faraxumeeyaan
“Ilmo u rabbee siduu ku socon lahaa”
YEHOWAH DADAALKAAGA WUU KUGU ABAALGUDI DOONAA
Waalid haddii ad tahay shaqo gaar ah baa lagu siiyay oo ah inaad ilmahaaga bartid fekerka Yehowah. (Efesos 6:4) Yehowah wuu ka warqabaa inay tani hawl culus tahay. Haddaba waad ku kalsoonaan kartaa inay ugu dambeynta Yehowah ammaan u keeni doonto. Adigana farxad weyn bay ku siin doontaa.—Maahmaahyadii 23:24.
Sidee baan u hubin karaa inuu ilmahayga wax walba igala hadli karo?
Waalidka kale siday carruurtooda u koriyaan maxaan ka baran karaa?
Wadaag Wadaag Carruurtaada Sida Wax Loo Baro
Qoraal Liiska download gareyska wargeysyo digital ah Reerkaaga Farxad Bay Heli Karaan
Audio Liiska download gareyska maqalka Reerkaaga Farxad Bay Heli Karaan
Wadaag Wadaag Reerkaaga Farxad Bay Heli Karaan